ထူးထူးခြားခြား ပင့်ကူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ထူးထူးခြားခြား ပင့်ကူများ
ရခိုင် ဘက်မှာနေ တုန်း က အကိုက် ခံရင် ၊ အခန့် မသင့် ရင် သေ နိုင်တဲ့ ၊ မသေတောင် အကိုက် ခံရတဲ့ နေရာ က အသားတွေ ပဲ့ ကျ သွားအောင် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ကြွေ ပင့် ကူ လို့ ခေါ်တဲ့ တောကြီး ပင့် ကူ တွေ တွေ့ ဖူးသလို၊အကိုက် ခံရတဲ့ လူနာတွေ လည်း တွေ့ ဖူးတယ်။ တချို့ဆို အချို ပန်းကန် ပြား အရွယ် လာက် ရှိတယ်။ အခု အကောင်လေးတွေ က ကြည့် ရတာ ကြောက် စရာမကောင်း ဘူး၊ အဆိပ်တော့ ရှိ မှာပဲ ထင်တယ်။
Spiderman ဖြစ်စေတဲ့ ပင့်ကူမရှိဘူးလားဟင်
အိမ်း အိမ်း ကောင်းပေစွ ကောင်းပေစွ
ယူထားတဲ့ မေဂျာကတော့ ဇူးမေဂျာပါပဲ။ ကျောင်းပြီးထဲက ဘာမှမသိတော့တာ။ ခုမှပဲ သေချာသိတော့တယ်။ ပင့်ကူတွေက ကျိုက်ထီးရိုးမှာဆိုရင် ဆေးမြစ်တွေနဲ့ ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေးတောင် ထုတ်တယ်နော်။ ဒီကောင်တွေလည်း လိမ်းဆေးဖော်လို့ရတယ်မလား။
မမြင်ဖူးတာတွေ မြင်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
အပင်မှာသစ်ကိုင်းခြောက်လေး မှတ်လို့ချိုးမလို့ ကိုင်မိတော့မှ
မဟာရာဇာရေ…….ပြူးကြောင်ကြောင်ပင့် ကူနဲ့ ပြုးံနေတဲ့ ပင့် ကူကို
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရတဲ့သူအတွက် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။
ပနားမားမှာ ပင့်ကူဂဏာန်းနဲ့ ဂဏန်းပင့်ကူ မတူဘူးတဲ့
ကိုအံစာတုံးရေ ငှက်ချီးနဲ့ တူတဲ့ကောင်က ကြောက်စရာဗျာ။
ကိုတောက်တဲ့ ဟိုနေ့ကပို့စ်ကိုတွေ့တယ် မအားတော့မမန့်ဖြစ်ဘူး ……. အခုတော့ ကိုတောက်တဲ့ပို့စ်ကို မနည်းရှာပီး မန့်လိုက်တယ် ဒါက ကိုတောက်တဲ့ကိုသတိရနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အထိန်းအမှတ်ပေ့ါ ……… ပင့်ကူတွေ မွေတွေဆိုစိတ်မ၀င်စားဘူး …… ဗဟုအနေနဲ့တော့ကြည့်သွားပါတယ် ……
ပင့်ကူတွေကိုစုံနေတာပဲ။ တခါမှမမြင်ဘူးဖူး။ အောက်ဆုံးက ပြုံးနေတဲ့ပင့်ကူလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…။ ဂျယ်လီ လေးကြနေတာပဲ။ စားတောင်စားချင်တယ်…. အဟိ။